Xarigga suxufiyiinta Sacuudiga o soo jiitay indhaha dunida, ka dib dilkii Khaashuqji - BBC News Somali
Xarigga suxufiyiinta Sacuudiga o soo jiitay indhaha dunida, ka dib dilkii Khaashuqji
Xigashada Sawirka, RSF
Seddex gabdhood ayaa ku jira 28ka suxufi ee xiran
Iyadoo muranka la xiriira kiiska dilka wariyihii caanka ahaa ee u dhashay Sucuudiga, Jamaal Khaashuqji, uu heerkii ugu sarreeyay marayo ayey ururka Suxufiyiinta aan xuduudda lahayn ee RSF waxay sheegeen in 28 wariye oo kale ay ku xiran yihiin Sucuudiga.
Waxaa ku jira wariyaha ka tirsan warbaahinta Citizen ee lagu magacaabo Raa'if Badawi, kaasoo sannadkii 2012-kii lagu riday xukun 10 sano oo xabsi ah iyo 1,000 jeedal, oo la sheegay inuu ku muteystay aflagaadeynta islaamka.
Xaaladda Suxufiyiinta caalamka oo laga dayrinayo
Wariye oo lagu magacaabo Fayez Bin Damakh, oo sidoo kale abwaan ahaa, waa la la'yahay meel la geeyay.
Calaa Briji 2016 ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah iyo 50,000 oo riyaal oo ganaax ah
-Waliid Abu al Khair, oo ah aasaasaha hay'adda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka Sucuudiga.
Maxaa magaalada Garowe looga taxaabay boqolaalka neef ee ariga ah?
Waxaan ogaaday inuu awowgey dilaa ahaa markii aan billaabay xasuus qorkiisa